Ogige Ndị Nlekọta LinkedIn | Martech Zone
Tọzdee, Nọvemba 17, 2011 Sunday, Jenụwarị 15, 2017 Douglas Karr
LinkedIn nwere ihe karịrị nde mmadụ 135 nọ na mba ụwa na ego ezinụlọ na-enweta nke onye ọrụ LinkedIn karịrị $ 100,000 kwa afọ! Ihe mbụ m na-eme mgbe m na-alọta njem azụmahịa ma ọ bụ nzukọ bụ itinye ndị kọntaktị m niile na LinkedIn, nyochaa profaịlụ ha, wee hụ ndị m kwesịrị iso. N'eziokwu, Anaghị m anabata mmalite ma ọ bụrụ na ịnweghị profaịlụ LinkedIn zuru oke, ọ bụ ọgụ izizi megide gị.
LinkedIn bụ ilu ọchịchịrị nke ilu mgbasa ozi. Anyị niile maara na ọ nọ ebe ahụ, mana ole na ole jiri ya were ike ya. Nke a bụ nnukwu ndudue, ọkachasị mgbe ị n’ahịa azụmaahịa gị. Ọzụzụ ọzụzụ kpụ ọkụ n'ọnụ LinkedIn a ga-enye gị ngwaọrụ ndị dị mkpa iji saịtị ahụ maka azụmaahịa gị na mkpa ahịa gị. Site na Mindflash infographic.
Naanị ihe ọjọọ m nwere maka LinkedIn bụ na ogo otu dị iche iche agbadatala nke ọma na ndị spammers ma nweta ego ngwa ngwa. Ọzọkwa, anyị ahụbeghị traction ọ bụla na mgbasa ozi LinkedIn. Ọ dị ka ọ bụ ebe nkwụsị maka ndị azụmaahịa. Ha mikpuo onwe ha, nweta ihe ha chọrọ ma pụọ. O yighị ka ọ dị ihe na-akpali akpali ịdebe ndị ọbịa ebe ahụ.
Tags: azụmahịa jikọtaraLinkedInnetworkin networkMbido njikọ